ဟလို။ ။ ။ xin chào။ Halo
ချင်တယ်: ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရောင်းချပါ
ချင်တယ်: ၀ န်ဆောင်မှုများအကြောင်းမေးမြန်းပါ
ချင်တယ်: တွဲဖက်အဖြစ် join
ချင်တယ်: အလုပ်ရှာဖွေရေး @ WorldRef!
ချင်တယ်: ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး နှင့်ပြောဆိုပါ
ကမ္ဘာလုံးအနှံ့အပြားရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာများ။ အကောင်းဆုံးအရာ? ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေခြင်းဝန်ဆောင်မှုသည်သင်တို့အတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
Sourcing နိုင်ငံများ ဘယ်နိုင်ငံကနေသင်ရင်းယူချင်ပါသလဲအာဖဂန်နစ္စတန်အော်လန်ကျွန်းစုအယ်လ်ဘေးနီးယားအယ်လ်ဂျီးရီးယားအမေရိကန်ဆာမိုအာအင်ဒိုရာအင်ဂိုလာနိုင်ငံအန်ဂွီလားအန္တာတိကဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအာဂျင်တီးနားအာမေးနီးယားယူးဘားၾသစေတးလ်သြစတြီးယားအဇာဘိုင်ဂျန်ဘဟားမားဘာရိန်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘာဘေးဒိုးစဘယ်လာရုစ်ဘယ်လ်ဂျီယမ်belizeဘီနင်ဘာမြူဒါဘူတန်ဘိုလီးဗီးယား (၏ Plurinational ပြည်နယ်)ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားဘော့ဆွာနာဘူးဗက်ကျွန်းဘရာဇီးဗြိတိန်နိုင်ငံကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကိုဘရူနိုင်းဘူလ်ဂေးရီးယားBurkina Fasoဘူရွန်ဒီCabo Verdeကမ္ဘောဒီးယားကင်မရွန်းကေနဒါကေမန်ကျွန်းစုဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံချဒ်ချီလီတရုတ်နိုင်ငံခရစ္စမတ်ကျွန်းကိုးကိုစ် (ကီးလင်) ကျွန်းများကိုလံဘီယာကော်မ္မရိုဇ့်ကွန်ဂိုကွန်ဂို (ထိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ)ကွတ်ကျွန်းစုကော့စတာရီကာCote d'Ivoireခရိုအေးရှားကျူးဘားကူရကာအိုဆိုက်ပရပ်စ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံဒိန္းမတ္ဂျီဘူတီနိုင်ငံဒိုမီနီဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအီကွေဒေါနိုင်ငံအဲဂုတ္တုပြည်၌အယ်လ်ဆာဗေးဒေါအီကွေတာဂီနီနိုင်ငံအီရီထရီးယားအက်စ်တိုးနီးယားအီသီယိုးပီးဖောက်ကလန်ကျွန်းစု (မာလ်ဗီး)ဖရိုးကျွန်းစုဖီဂျီဖင်လန်ပြင်သစ်ပြင်သစ်ဂီယာနာပြင်သစ်ပိုလီနီးရှားပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနယ်မြေgabonဂမ်ဘီယာGeorgiaဂျာမနီဂါနာဂျီဘရောလ်ဂရိနိုင်ငံဂရင်းလန်းနေးဒါGuadeloupeဂူအမ်ကျွန်းဂွာတီမာလာဂါဇီးဂီနီနိုင်ငံဂီနီဘစ်ဂိုင်ယာနာဟေတီဟာ့ကျွန်းနှင့်မက်ဒေါ်နယ်ကျွန်းများဟွန်ဒူးရပ်စ်ဟောင်ကောင်ဟန်ဂေရီအိုက်စလန်အိႏၵိယအင်ဒိုနီးရှားအီရန် (၏အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံ)အီရတ်အိုင်ယာလန် (သမ္မတနိုင်ငံ)လူသား၏ကျွန်းဣသရလေအီတလီဂျမေကာဂျပန်ဂျာစီယော်ဒန်မြစ်ကာဇက်စတန်ကင်ညာကီရီဘာတီကိုရီးယား (ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ)ကိုရီးယား (သမ္မတနိုင်ငံ)ကူဝိတ်ကာဂျစ္စတန်လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံလတ်ဗီးယားလေဗနုန်တောလီဆိုသိုလိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံလစ်ဗျားနိုင်ငံလီချင်စတိန်းလစ်သူလူဇင်ဘတ်မကာအိုမက်ဆီဒိုးနီးယားဒါဂတ်စကာမာလာဝီမေလးရွားမော်လ်ဒိုက်မာလီမော်လ်တာမာရှယ်ကျွန်းစုမာတီနစ်Mauritaniaမောရစ်ရှမာယော့တ်မက္ကစီကိုMicronesia (ပြည်ထောင်စု)မော်လ်ဒိုဗာ (သမ္မတနိုင်ငံ)မိုနာကိုမွန်ဂိုလီးယားမွန်တီနီဂရိုးမွန်ဆာရတ်မော်ရိုကိုမိုဇမ်ဘစ်ျမန္မာႏုိင္ငံနမီးဘီးယားNauruနီပေါနယ်သာလန်နယူးကယ်လီဒိုးနီးယားနယူးဇီလန်နီကာရာဂွာနိုင်ဂျာနိုင်ဂျီးရီးယားနီယူးNorfolk ကျွန်းမြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများေနာ္ေဝးအိုမန်ပါကစ္စတန်ပလောင်းပါလက်စတိုင်း (ပြည်နယ်)ပနားမားပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံပါရာဂွေးပီရူးဖိလစ္ပုိင္Pitcairn-ပိုလန်ပေါ်တူဂီPuerto Ricoကာတာနိုင်ငံRéunionရိုမေးနီးယားရုရှားပြည်ထောင်စုရဝမ်ဒါစိန့်ဘာသယ်လဲမီစိန့်ဟယ်လီနာ, တက်မြန်းသည့်နေ့များနှင့်ထရစ်စ da Cunhaစိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်စိန့်လူစီယာစိန့်မာတင် (ပြင်သစ်အစိတ်အပိုင်း)စိန့်ပီယားနှင့်မီကွီလွန်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်းဆာမိုအာဆန်မာရီနိုစဝ်တုန်နှင့်ပရဆော်ဒီအာရေဗျsenegalဆားဘီးယားseychellesဆီယာရာလီယွန်စင္ကာပူႏုိင္ငံစိန့်မာတင် (ဒတျချြအစိတ်အပိုင်း)ဆလိုဗက်ကီးဆလိုဗေးနီးဆော်လမွန်ကျွန်းစုဆိုမာလီယာတောင်အာဖရိကတောင်ဂျော်ဂျီယာနှင့်တောင် Sandwich ကကျွန်းစုတောင်ပိုင်းဆူဒန်စပိန်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆူဒန်ဆူရာနမ်Svalbard နှင့်ဇန်နဝါရီ Mayenဆွာဇီလန်ဆြီဒင္ႏုိင္ငံဆွစ်ဇလန်ဆီးရီးယားအာရပ်သမ္မတနိုင်ငံထိုင်ဝမ်တရုတ်ပြည်နယ်ရှိTajikistanတန်ဇန်းနီးယား (၏ယူနိုက်တက်သမ္မတနိုင်ငံ)ထုိင္းႏုိင္ငံအရှေ့တီမောတိုဂိုအဘိဓါန် TokelauTongaထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုတူနီးရှားကြက်ဆင်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်တူရကီနှင့်စိုးကော့စ်ကျွန်းများTuvaluယူဂန်ဒါနိုင်ငံယူကရိန်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန်၏ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအမေရိကန်ြပည်ထောင်စုယူနိုက်တက်စတိတ်မိုင်းနာ​​းပြင်ပကျွန်းများဥရုဂွေးဥဇဘက်ဗာနူအာဗာတီကန်စီးတီးပြည်နယ်ဗင်နီဇွဲလား (၏ Bolivarian သမ္မတနိုင်ငံ)ဗီယက်နမ်Virgin Islands (ဗြိတိန်နိုင်ငံ)Virgin Islands (အမေရိကန်)Wallis နှင့် Futuna-အနောက်တိုင်းဆာဟာရယီမင်ဇမ်ဘီယာဇင်ဘာဘွေ
လိုအပ်သောနိုင်ငံ * လိုအပ်သောနိုင်ငံအာဖဂန်နစ္စတန်အယ်လ်ဘေးနီးယားအယ်လ်ဂျီးရီးယားအမေရိကန်ဆာမိုအာအင်ဒိုရာအင်ဂိုလာနိုင်ငံအန်ဂွီလားအန္တာတိကဂွါနှင့်ဘာဘူဒါအာဂျင်တီးနားအာမေးနီးယားယူးဘားၾသစေတးလ်သြစတြီးယားအဇာဘိုင်ဂျန်ဘဟားမားဘာရိန်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘာဘေးဒိုးစဘယ်လာရုစ်ဘယ်လ်ဂျီယမ်belizeဘီနင်ဘာမြူဒါဘူတန်ဘိုလီးဗီးယား (၏ Plurinational ပြည်နယ်)ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနားဘော့ဆွာနာဘူးဗက်ကျွန်းဘရာဇီးဗြိတိန်နိုင်ငံကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကိုဘရူနိုင်းဘူလ်ဂေးရီးယားBurkina Fasoဘူရွန်ဒီCabo Verdeကမ္ဘောဒီးယားကင်မရွန်းကေနဒါကေမန်ကျွန်းစုဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံချဒ်ချီလီတရုတ်နိုင်ငံခရစ္စမတ်ကျွန်းကိုးကိုစ် (ကီးလင်) ကျွန်းများကိုလံဘီယာကော်မ္မရိုဇ့်ကွန်ဂိုကွန်ဂို (ထိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ)ကွတ်ကျွန်းစုကော့စတာရီကာခရိုအေးရှားကျူးဘားကူရကာအိုဆိုက်ပရပ်စ်ချက်သမ္မတနိုင်ငံCote d'Ivoireဒိန္းမတ္ဂျီဘူတီနိုင်ငံဒိုမီနီဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံအီကွေဒေါနိုင်ငံအဲဂုတ္တုပြည်၌အယ်လ်ဆာဗေးဒေါအီကွေတာဂီနီနိုင်ငံအီရီထရီးယားအက်စ်တိုးနီးယားအီသီယိုးပီးဖောက်ကလန်ကျွန်းစု (မာလ်ဗီး)ဖရိုးကျွန်းစုဖီဂျီဖင်လန်ပြင်သစ်ပြင်သစ်ဂီယာနာပြင်သစ်ပိုလီနီးရှားပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနယ်မြေgabonဂမ်ဘီယာGeorgiaဂျာမနီဂါနာဂျီဘရောလ်ဂရိနိုင်ငံဂရင်းလန်းနေးဒါGuadeloupeဂူအမ်ကျွန်းဂွာတီမာလာဂါဇီးဂီနီနိုင်ငံဂီနီဘစ်ဂိုင်ယာနာဟေတီဟာ့ကျွန်းနှင့်မက်ဒေါ်နယ်ကျွန်းများဟွန်ဒူးရပ်စ်ဟောင်ကောင်ဟန်ဂေရီအိုက်စလန်အိႏၵိယအင်ဒိုနီးရှားအီရန် (၏အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံ)အီရတ်အိုင်ယာလန် (သမ္မတနိုင်ငံ)လူသား၏ကျွန်းဣသရလေအီတလီဂျမေကာဂျပန်ဂျာစီယော်ဒန်မြစ်ကာဇက်စတန်ကင်ညာကီရီဘာတီကိုရီးယား (ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ)ကိုရီးယား (သမ္မတနိုင်ငံ)ကူဝိတ်ကာဂျစ္စတန်လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံလတ်ဗီးယားလေဗနုန်တောလီဆိုသိုလိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံလစ်ဗျားနိုင်ငံလီချင်စတိန်းလစ်သူလူဇင်ဘတ်မကာအိုဒါဂတ်စကာမာလာဝီမေလးရွားမော်လ်ဒိုက်မာလီမော်လ်တာမာရှယ်ကျွန်းစုမာတီနစ်Mauritaniaမောရစ်ရှမာယော့တ်မက္ကစီကိုMicronesia (ပြည်ထောင်စု)မော်လ်ဒိုဗာ (သမ္မတနိုင်ငံ)မိုနာကိုမွန်ဂိုလီးယားမွန်တီနီဂရိုးမွန်ဆာရတ်မော်ရိုကိုမိုဇမ်ဘစ်ျမန္မာႏုိင္ငံနမီးဘီးယားNauruနီပေါနယ်သာလန်နယူးကယ်လီဒိုးနီးယားနယူးဇီလန်နီကာရာဂွာနိုင်ဂျာနိုင်ဂျီးရီးယားနီယူးNorfolk ကျွန်းမြောက်ပိုင်းမက်ဆီဒိုးနီးယားမြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများေနာ္ေဝးအိုမန်ပါကစ္စတန်ပလောင်းပါလက်စတိုင်း (ပြည်နယ်)ပနားမားပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံပါရာဂွေးပီရူးဖိလစ္ပုိင္Pitcairn-ပိုလန်ပေါ်တူဂီPuerto Ricoကာတာနိုင်ငံရိုမေးနီးယားရုရှားပြည်ထောင်စုရဝမ်ဒါRéunionစိန့်ဘာသယ်လဲမီစိန့်ဟယ်လီနာ, တက်မြန်းသည့်နေ့များနှင့်ထရစ်စ da Cunhaစိန့်ကစ်နှင့်ဗစ်စိန့်လူစီယာစိန့်မာတင် (ပြင်သစ်အစိတ်အပိုင်း)စိန့်ပီယားနှင့်မီကွီလွန်စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်းဆာမိုအာဆန်မာရီနိုစဝ်တုန်နှင့်ပရဆော်ဒီအာရေဗျsenegalဆားဘီးယားseychellesဆီယာရာလီယွန်စင္ကာပူႏုိင္ငံစိန့်မာတင် (ဒတျချြအစိတ်အပိုင်း)ဆလိုဗက်ကီးဆလိုဗေးနီးဆော်လမွန်ကျွန်းစုဆိုမာလီယာတောင်အာဖရိကတောင်ဂျော်ဂျီယာနှင့်တောင် Sandwich ကကျွန်းစုတောင်ပိုင်းဆူဒန်စပိန်သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဆူဒန်ဆူရာနမ်Svalbard နှင့်ဇန်နဝါရီ Mayenဆွာဇီလန်ဆြီဒင္ႏုိင္ငံဆွစ်ဇလန်ဆီးရီးယားအာရပ်သမ္မတနိုင်ငံထိုင်ဝမ်တရုတ်ပြည်နယ်ရှိTajikistanတန်ဇန်းနီးယား (၏ယူနိုက်တက်သမ္မတနိုင်ငံ)ထုိင္းႏုိင္ငံအရှေ့တီမောတိုဂိုအဘိဓါန် TokelauTongaထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုတူနီးရှားကြက်ဆင်တာ့ခ်မင်နစ္စတန်တူရကီနှင့်စိုးကော့စ်ကျွန်းများTuvaluယူဂန်ဒါနိုင်ငံယူကရိန်းအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဂရိတ်ဗြိတိန်နှင့်မြောက်အိုင်ယာလန်၏ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းယူနိုက်တက်စတိတ်မိုင်းနာ​​းပြင်ပကျွန်းများအမေရိကန်ြပည်ထောင်စုဥရုဂွေးဥဇဘက်ဗာနူအာဗာတီကန်စီးတီးပြည်နယ်ဗင်နီဇွဲလား (၏ Bolivarian သမ္မတနိုင်ငံ)ဗီယက်နမ်Virgin Islands (ဗြိတိန်နိုင်ငံ)Virgin Islands (အမေရိကန်)Wallis နှင့် Futuna-အနောက်တိုင်းဆာဟာရယီမင်ဇမ်ဘီယာဇင်ဘာဘွေအော်လန်ကျွန်းစု
ပစ္စည်းကိရိယာနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရောင်းချပါ
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံ ၂၀ တွင်ပစ္စည်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရောင်းချပါ။ ခိုင်မာသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစုံစမ်းမှုများကိုသာမှတ်ပုံတင်ပြီးခံစားပါသို့မဟုတ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရည်စူးထားသည့်အစီအစဉ်များကိုမေးမြန်းပါ။
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏စီးပွားရေးကို WorldRef ၀ န်ဆောင်မှုများဖြင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချထား ကျွန်တော်တို့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျတစ်ခုသာကျပြီးသင်နှင့်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်။
လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများ လိုအပ်သောဝန်ဆောင်မှုများစက်မှုအရင်းအမြစ်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုTurnkey စီမံကိန်း Solutionsအင်ဂျင်နီယာ & ဒီဇိုင်းမြို့ပြဆောက်လုပ်ရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ္Financeာရေးအကြံပေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူအင်အားဖြေရှင်းနည်းများဘာသာပြန်ဝန်ဆောင်မှုများစီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတိုင်ပင်ခံပို့ကုန်သွင်းကုန်အထောက်အပံ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတင်ဒါပါဝင်မှုနိုင်ငံတကာစျေးကွက်သုတေသနO&M၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းဆောက်လုပ်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးရှိနေခြင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအမှတ်တံဆိပ်စီးပွားရေးအာမခံဝန်ဆောင်မှုများနိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစီမံကိန်းကြောင့် - လုံ့လဝီရိယနိုင်ငံတကာစျေးကွက်လည်ပတ်မှုစွမ်းအင်စာရင်းစစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာရေးကန်ထရိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောင်းချသူမှတ်ပုံတင်ခြင်းတပတ်ရစ်စက်မှုစက်ယန္တရားစိုက်ထူ & လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများစမ်းသပ်ခြင်း & လက်မှတ်တတိယပါတီစစ်ဆေးခြင်းဥပဒေရေးရာနှင့်အခွန်အကြံပေးမြန်ဆန် & စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအကဲဖြတ် & တန်ဖိုးGeo နည်းပညာလေ့လာမှုများနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးပြပွဲဒေသဆိုင်ရာကုဒ်များ & စံချိန်စံညွှန်းများသင်တန်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစက်မှုဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးအတည်ပြုအရေးပေါ်ဝယ်ယူမှုAfter-Sales Service ပံ့ပိုးမှုအပိုပစ္စည်းများ၊အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစာချုပ်စီမံခန့်ခွဲမှု
စက်မှုလုပ်ငန်း စက်မှုလုပ်ငန်းစိုက်ပျိုးရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများလေထုညစ်ညမ်းမှုထိန်းချုပ်ရေးဘွိုင်လာ & အပူဖြေရှင်းချက်ဘိလပ်မြေစက်ရုံဆောက်လုပ်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံထိန်းချုပ်ရေးနှင့်ကိရိယာရေစနစ်လျှပ်စစ်စနစ်အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာရေအားလျှပ်စစ် Solutionsစက်မှုဓာတုပစ္စည်းများစက်မှုကိရိယာများနှင့် Hardwaresပစ္စည်းကိုင်တွယ်မှုစက်မှု BOPသတ္တုတွင်းနှင့်သတ္တုဓာတ်ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေနံဓာတုပစ္စည်းများဆေးဝါးများပိုက်စနစ်ပလတ်စတစ်၊ ဖန်နှင့်ကြွေထည်မြေထည်၊ပျော့ဖတ်နှင့်စက္ကူနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးသံမဏိနှင့်သတ္တုသကြား & Bioethanolစမ်းသပ်ခြင်း & ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းပစ္စည်းကိရိယာအပူပါဝါ & Cogenတာဘိုင်, မီးစက် & အရန်ရေနှင့်ရေဆိုးရေ
အလုပ်ရှာဖွေရေး @ WorldRef!
အတူတူ၊ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုတည်ဆောက်ကြစို့။ သင်၏အမြန်ဆုံးအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထံပြန်ပို့ပါ။
ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ *
ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး နှင့်ပြောဆိုပါ
20 Cecil Street #05-03 Plus, Singapore - ၀၄၉၇၀၅
G-1701, Amrapali Silicon City, Sector-76, Noida, India 201304